NIU na-enye eScooter eletrik eletrik, ihe N1 | Akụkọ akụrụngwa
Na nke a, anyị ga-ekwu maka ngosipụta nke igwe eletriki na smart skuta, NIU N1. Onye skuuta a nwere igwe Bosch, batrị Panasonic na Vodafone Njikota, ya mere o na agbakwunye ulo oru kachasi nma karie uzo ahia ahia.
Site na imepụta obi ike na teknụzụ ọgbara ọhụrụ, N1 bụ ezigbo ihe ngwọta maka ndị na-achọ ụdị agagharị na obodo. Na mgbakwunye, ụgbọ a nwere nnukwu katalọgụ nke ngwa, maka ụgbọ ala ahụ na onye nwe ya yana ihe kachasị mma bụ Ọnụahịa ahụ na-asọ mpi.
A tụụrụ ime NIU kemgbe amalitere ya dị ka ụlọ ọrụ teknụzụ nke ebumnuche ya bụ iji belata mmetụta nke agagharị nke obodo ndị nke oge a na-enye site na ịnye ndị Smart eScooters kachasị elu n'ụwa na, na 2015, mwepụta nke N1 ghọrọ otu n'ime ihe ịga nke ọma mkpọsa igwe mmadụ na ụwa na-enweta nde dolla 11 na ụbọchị iri na ise.
N'okwu a, ọ nwekwara ezigbo aka nke ngwa ndị sitere na azụ azụ na ikpe azụ, yana nha dabara na agba, na nkwado maka ama ma ọ bụ mkpuchi ụkwụ. N'ime ọnwa ole na ole sochirinụ, ngwa ọhụrụ ga-abata na Spain, na ebumnuche nke inye ndị nwe ụlọ N1 nhọrọ ndị ọzọ iji hazie eScooter ha ka ha si chọọ.
1 Fọdụ n'ime nkọwa ya bụ isi
2 Banyere ụlọ ọrụ
Fọdụ n'ime nkọwa ya bụ isi
Regenerative braking usoro na-enye ohere regenerate ruo 6% nke batrị mgbe braking
Drivingzọ ịkwọ ụgbọala atọ: Eco (18km / h), Oru oma (35km / h) na Egwuregwu (45km / h). Na mgbakwunye na ịbelata ọsọ ọsọ, ụdị ịnya ụgbọ ala na-enye nnyefe ike dị iche iche (osooso)
Njikwa ụgbọ mmiri: ịpị bọtịnụ na-ejide osooso mgbe niile. Nchekwa onwe-ihe na-adịghị mma: na njedebe nke uzo ndị na-egosi ya gbanyụọ onwe ha (dị ka n'ụgbọala)
Ọgụgụ isi: na-etinye ihe mmetụta dị nro na ngalaba nchịkwa, nke na-achịkwa ike nke ọkụ ọkụ niile dabere na ọkụ ihu igwe.
Anti-ezu ohi usoro na mkpu dị ka ọkọlọtọ (ime akara). Na-agụnye usoro 2 nke igodo + zuru ezu
Njikọ USB, oghere aka na nko nchekwa
Akara Dị: White, Black, Matte Black, Red na Matte Gray
Ọnụ ego nke skuta N1 a na-amalite na € 2.899. 21% VAT gụnyere na ọnụahịa ma tinye ya ozugbo na asọmpi, n'ụzọ ezi uche na ọnụahịa adịghị agụnye ndebanye aha, ụtụ isi n'okporo ụzọ ma ọ bụ mkpuchi mmanye.
Maka ndị na-amaghị, NIU bụ ụlọ ọrụ 1 Smart eScooters na ụwa ma nwee ndị otu ụlọ ọrụ si n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ka BMW, Microsoft, Volkswagen, Huawei, McKinsey, KKR na Bain Capital; ha niile gbara mbọ ịgbanwe mgbanwe nke mba ụwa niile. N'okwu a, e gosipụtara eScooter na Barcelona na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ a bụ onye bịara ọhụrụ na Spain, o merie mpaghara Asia na Europe na ihe karịrị 500k nkeji rere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » NIU na-enye eScooter eletrik eletrik, ihe N1
Wiko View2: sentimita 6 na usoro 19: 9 maka naanị 199 euro